Qaliinka soo celinta bikrada - BBC Somali
Qaliinka soo celinta bikrada
Bikranimada gabdhaha da'ada yar ee Iran ayaa leh muhiimad weyn oo dhinaca bulshada iyo dhaqankaba ah. Haween badan ayaa isku sameeya qaliin si ay soo celiyaan bikranimadooda ka hor habeenka aqalgalka.
"Isbitaalka ayaa lay dhigay kadib markii aan galay shil, sinta ayaa iga jabtay, xanuunna wuu i haayay. Kadib hooyadey ayaa weydiisatay dhakhaatiirta in la hubiyo bikranimadeyda."
Mahnaz ayaa aheyd 21 jir markii ay shilka ku gashay waqooyiga Iran kaasi oo ay ku weyday walaakeed iyo dumaashideed. Waxa kaliya oo ay ka welwelsanaayeen mas'uuliyiinta Iran ayaa aheyd in bikranimadeeda ay weyday.
Waxay sheegtay: "Maalinkii ay hooyadey weydiisatay in la hubiyo bikranimadeyda ayuu qabiir ka socdo ururka qeynuunka daawada Iran (ILMO) yimid, kadib markii ay hubinta sameeyeen ayey na siiyeen warqad oraneysa inaan shilka ku waayay bikranimadeyda".
Si kasta ha ahaatee, qaar ka mid ah gabdhaha Iran ayaa galma sameeya ka hor guurka. Marka ay go'aansadaan inay guursadaan uuna soo doonto nin aysan garaneyn ayey sameeyan qaliinka bikro soo celinta.
Sanaz ayaa sameysay sadax sano ka hor qaliinkan, iyadoo sheegtay in qoyskeeda ahludiin yihiin. "Waxaan doonayay inaan xor ahaado oo aan go'aanka jirkeyga gaaro balse qoyskeyga ma ogola. Wiil aan saaxibo aheyn oo aan wada seexanay, isna guursan weynay ayaa iga cawiyay helista dhakhtar gaar ah sidaasi ayaan ku sameeyay qaliinka. Sanad kadib ayaan guursaday ninkeygana wuxuu ii maleeyay inaan bikro ahay".
Somaiah ayaa sidoo kale martay qalinka iyadoo sheegtay, "Faraqa ragga iyo dumarka ayaa ah in ragga ay sameyn karaan galmood intii ay doonaan kadib ay isku dayayaan inay helaan gabar bikro ah. Waan dooneynaa inaan galmood sameyno ka hor guurka. Qaliinkan ayaa noo ogolaanayo inaan soo ceshano bikranimadeena marka aan galmood sameyno hadii ay bakranimo muhiim tahay".